ကြှနျုပျတို့မညျဘုရားသခင်အဘို့အကြှနျုပျတို့၏လက်ဆောင်များကိုသုံးပါပါနဲ့? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဒီ Raleigh အတွက်ကြိုတင်ကောလိပ်ညီလာခံကနေအတိုချုပ်သတင်းစကားဖြစ်ပါသည်, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာ​​း. သငျသညျအောကျဖျောပွလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်ရှုနိုင်သည်:
သငျသညျအစဉျအမွဲလေးတွေမေးခွန်းများမေးကြားရကြပြီ? သူတို့ကမကုန်မဆုံးရှိသည်ဖို့ပုံထားတဲ့အံ့သြဖွယ်သိချင်စိတ်ရှိ. ဒါကမှော်မေးခွန်း “အဘယ်ကြောင့်” နာရီနှင့်နာရီပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်. ငါလေးတွေအခုဒီအဆင့်၌ရှိကြ၏သူမိတ်ဆွေများရှိ. ကောင်းပြီဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မေးမြန်းဖို့ likes ကြောင်းကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျအတွက်အနည်းငယ်ကလေးရှိရဲ့ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်စိတ္တဇမေးခွန်းများကိုအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ဖွင့်.
ငါအရမ်းလွယ်ကူစွာလှုံ့ဆော်မဟုတ်ဘူး. သဘာဝကျကျမောင်းနှင်နေသောလူတချို့ရှိပါတယ်, တစ်ခုခုပြုမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့အဘို့အလုံလောက်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော့်ဇနီးထိုလူတစျဦးဖွစျသညျ; ငါမဟုတ်ဘူး.
အမိန့်၌ငါ့ကိုပြီးပြီဘာမှမရရန်အဘို့အ, ငါမကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာပေါ့သောသဘောလိုအပ်ပါတယ်. "ဒါပေမဲ့လျှင်ငါသည်ဤအမှိုက်များထဲကယူ, ထိုအမှိုက်ယောက်ျားသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်?"ကျွန်မနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာကောင်လေးပေါ့, ငါမရှိသလောက်အသေးစိတ်ကိုသို့မဟုတ်ငွီးငှေ့ဖှယျတာဝန်များကိုမှရေးဆွဲတာပါ. ကံမကောင်းသဖြင့်, အသေးစိတျနဲ့ငွီးငှေ့ဖှယျတာဝန်များကိုမှန်ကန်အသက်တာ၏အများစုဖြစ်ကြသည်. ငါအထက်တန်းကျောင်းအများကြီးရုန်းကန်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်နိုင်သည်, ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ပင်ပြီးနောက်. ငါ့အသင်္ချာအတန်းအသုံးမကျပုံရသည်နှင့်အိမ်စာငါ့အချိန်တစ်စွန့်ပစ်တူခံစားခဲ့ရ.
ငါတစ်ခါတစ်ရံလှုံ့ဆော်ခံရဖို့ကခက်ခဲတွေ့နိုငျသောတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်တာကိုသိရ. ငါတို့ရှိသမျှသည်က blah တစ်-အဆုံးသတ်ရေးဘယ်တော့မှသံသရာတူခံစားဘယ်မှာသူတို့အားရက်သတ္တပတ်များ. ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံမှသာကြီးမားသောအရာအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခံရဖို့လိုခငျြ, အရာအားလုံးကြီးတွေဇာတ်လမ်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်. ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေကိုပြောပြကြောင်းအဆိုပါကြီးမားတဲ့ပုံပြင်.
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုကျေးဇူးတော်အပင်မှန်ပေ၏. ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုဇာတ်လမ်းပြောပြ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုကျေးဇူးတော်အထင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေနိုင်သည်. အသက်ရှည်သမျှအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအထင်ကြီးခံရအခြားသူများအားဦးဆောင်ကြောင်းအနည်းငယ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်သည်လိုပဲ. တဲ့အခါမှာအစား၏အသက်ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်၏ကြီးမားသောဇာတ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးအခနျးကွီးဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာအားလုံးသညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေနှင့် ပတ်သက်. ဖွင့်
ငါအရာအားလုံးကိုစဉ်းစားရန်ဤလမ်းကိုစတင်သောအခါငါသတိရ. ကျနော်ငယ်ကိုမှန်ကန်ခဲ့သောအခါငါ rapping စတင်, ငါအကြောင်း rapped အားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခဲ့သည်. ထိုအခါငါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေဘို့အရှိကွောငျးကိုသဘောပေါက်, ခရီးစဉ်၏မဘုန်းအသရေ. ဒီနေရာတွင်ကယ့်ကိုအကြှနျုပျကိုခြီ messed သောကျမ်းပိုဒ်များ၏တဦးတည်းရဲ့.
15 သူကမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်၏ပုံရိပ်သည်, အားလုံးဖန်ဆင်းခြင်း၏သားဦး. 16 သူ့ကိုသောအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူနှင့်မြေကြီးပေါ်, မြင်နိုင်နှင့်မမြင်နိုင်သော, ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ, အစိုးရသို့မဟုတ်အစိုးရသောမင်းတို့သို့မဟုတ်ရှိမရှိအာဏာပိုင်များ-ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်အားဖြင့်သူ့ကိုဖန်တီးခဲ့ကြ.
ငါပေါလုသညျယရှေုအရာအားလုံးကဖန်တီးသောကြောင့်မည်မျှရှင်းလင်းပြတ်သားကိုချစ်. သူကဘာမှထွက်မချန်မထားပါဘူး. မြေပေါ်တွင်နှင့်ကောငျးကငျဘုံ၌ရှိသောအရာတို့ကို, သငျသညျမွငျနိုငျသောအရာတို့ကိုနှငျ့သငျမမွငျနိုငျသောအရာတို့ကို, အမျိုးမျိုး၏ရှင်ဘုရင်နှင့်မင်းများတို့သည်, ပင်ဝိညာဉ်ရေးရာတပ်ဖွဲ့များနှင့်အာဏာပိုင်များ. နောက်ပိုင်းမှာစာစောင်၌ (နှင့်အခြားနေရာများတွင်) ပေါလုကိုအစိုးရသောမင်းတို့သို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များအဖြစ်ဆိုးသောဝိညာဉ်ကိုရညျညှနျး. ထိုမင်းသည်သူတို့သညျဘုရားသခငျအားဖြင့်၎င်း, ဘုရားသခင်အဘို့ဖန်ဆင်းဟူမူကားရဲ့. ကောင်းပြီပင်နတ်ဆိုးများသညျယရှေုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြလျှင်, ယရှေုကို, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေများမှာ.
အကြောင်းကဘုရားသခငျ၏အခှငျ့အာဏာကသူ့ကိုလက်ကိုဘယ်တော့မှဖွစျကွောငျးသောကွဲပြားသောအရာတို့ကိုတစ်ခုမှာ. ဓမ္မရာဇဝင်အမွေခံအဖြစ်လာမည့်ထလာ. သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်. ရဲများကလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးတံဆိပ်ပေးအပ်ကြသည်. တယောက်တည်းဘုရားသခငျသညျအခွင့်အာဏာရဲ့သောသူသည်အစဉ်အမြဲတည်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်.
သူကအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မယူခဲ့ပါ. သူကအဘို့အလေ့ကျင့်ဘဲ. သူကထိုသို့အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ. သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်, သူကစွပ်စွဲပြစ်တင်ခံရဘယ်တော့မှ. အမှုအရာသည်သူ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ဖြစ်ခြင်း၏ဘို့အလိုငှါဖန်တီးခဲ့ကြနှင့်သူ၏ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခံရ.
ထိုကွောငျ့, ဘုရားသခင့ပဲသင်၏အသက်တာရဲ့အစိတ်အပိုင်းကနေဘုန်းအသရေရဖို့ရည်ရွယ်မထားဘူး, ဒါပေမယ့်သားအပေါငျးမှ.
ငါ IKEA ကနေပရိဘောဂမဝယ်ရတဲ့အခါ, ငါပြီးသားအရာနှစ်ခုသိ: 1, ဒီဖြစ်နိုင်လာမည့်နှစ်တွင်ခွဲလဲကြလိမ့်မည်. နှင့် 2, အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းညွှန်ကြားချက်အများကြီးဖြစ်ရှိသွားကြသည်.
ငါသည်တစာအုပ်စင်များအတွက်ရည်ရွယ်သောလူပေါင်း screw နှစ်ခုအချို့ကို ယူ. အခြားအရာတစ်ခုခုအဘို့ထိုသူတို့အသုံးပြုလျှင်စကားမပြောနိုင်သောမဖြစ်ပါ့? သူတို့က screw နှစ်ခုနှင့် tools- ဖို့သစ်သားပျဉ်ပြားကနေ purpose- အဘို့အကြှနျုပျအားပေးတျောမူထိုသူတို့ကကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကိုတည်ဆောက်၏အစိတ်အပိုင်းများမှာခဲ့ကြ. တိုင်းတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဆိုပါလက်ဆောင်များကိုသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းပြောပြ Toolbox အတွက် tools တွေကိုများမှာ. အထူးသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျော၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်အားပေး. သူတို့ကဘုရားသခငျသညျဘုနျးတျောကိုရောက်စေဖို့တည်ရှိ.
တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါစေခြင်းငှါ, အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုအကြောင်းသော်လည်း? ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးပွညျ့စုံအကွောငျးဘာ? ငါကြီးမြတ်ဖြစ်ချင်. ကောင်းပြီသင်သည်အစဉ်အကစားနိုင်ပါတယ်အကြီးမြတ်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍ, ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာတစ်အခန်းကဏ္ဍသည်. တဖန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကိုခေါ်တော်မူပြီ.
အဆိုပါပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရကျိုးနပ်တစ်ခုခုအဖြစ်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုတွေ့မြင်နှင့်အသက်ရှင်ကြပါဘူးဖြစ်ပါသည်. အကြှနျုပျတို့လုံလောက်ဘုန်းပွင့်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဲ့. သငျသညျဘုရားသခငျသညျဘယ်လောက်ကြီးကျယ်သောဥာဏ်ကိုစတင်လိုက်တဲ့အခါ, အဠာကိုယ်တော်တပါးတည်းသာသူ့ကိုဗဟိုပြုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥာဏ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျဟရှောယကိုဖတ်ရတဲ့အခါ 40 သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးသည်မိမိဘုန်းအသရေကိုယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လုယူခြင်းထက်လျော့နည်းချည်းနှီးဖြစ်၏သိမြင်. ဒါဟာသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်နှင့်သူကထိုက်တန်ပါတယ်!
လူဘုရားသခင်အကြောင်းဝါကွှားဘယ်မှာငါသမ္မာကျမ်း၏ထိုအရပ်ဖတ်ရန်သင့်အားအားပေးချင်ပါတယ်. ကျဟရှောယ 40. အတွက်ဟန္နရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ2ရှမွေလသည် 2. မောရှေသည်သီချင်းသူတို့ဧဒုံပင်လယ်မှတဆင့်သွားပြီးနောက်. ဆာလံ 135.
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲဒါသိသာမယ့်အကြောင်းကြောင့်တခါတရံဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေဘို့သင့်လက်ဆောင်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုစဉ်းစားရန်ခက်ခဲ. သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခြင်းဟာလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာပုံတစ်ခုခုရှိဟန်တဲ့အခါပိုပြီးသိသာင်. သို့မဟုတ်ပင်အနုပညာအတွက်. သို့သော်ထိုသို့သင့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်ဧညျ့ဖြစ်ဟန်ရှိသောအခါအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးင်.
ပေါလုကတခြားနေရာကောလောသဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သောသဲလွန်စပေးသည်. သူကောလောသဲအတွက်အဘယ်သို့မိန့် Listen 3.
23 သင်ပြုသမျှကို, ပျူအလုပ်လုပ်, သခင်ဘုရားအဘို့နှင့်မလူတို့သညျအဘို့အဖြစ်, 24 သခင်ဘုရားကနေသင့်ရဲ့ဆုလာဘ်အဖြစ်အမွေကိုခံယူမည်ဟုသင်တို့ သိ.. သင့်အနေဖြင့်သခင်ခရစ်တော်၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတယ်.
ပေါလုကအုပ်ချုပ်ရေးလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေသောအထင်အမြင်အောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး, ကလေးများကိုကူညီသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တွေကို, သို့မဟုတ်လက်ဆောင်တွေကိုဖွင့်ပြုပါတစ်ဦးသာမန်အလုပ်ကောင်းစွာယေရှု၏ဘုန်းအသရေအတွက်အသုံးပြုမရနိုငျမှ. ကျွန်တော်တို့ကသူမိန့်အပေါ်အခြေခံပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိမေးနိုငျသုံးလွယ်ကူသောမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်
သငျသညျကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်? ကြှနျုပျတို့သညျ "ပျူအလုပ်လုပ်" သငျ့
ကျနော်တို့လေးတွဲ့စွာလုပ်ကိုင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေနိုင်သည်. အထူးသဖြင့်ဘုရားသခငျ့ဘုနျးတျောကိုမှ connection ကိုအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဘယ်မှာအမှုအရာအတွက်. သို့သော်ပေါလုကအလုပ်နေကြတဲ့သို့မဟုတ်သင်၏နှလုံးရှိသမျှနှင့်အတူပြောပါတယ်. ကျနော်တို့ရိုးသားမှုနှင့်လုံ့လဝိရိယနဲ့အလုပ်လုပ်သင့်တယ်
2. သင်တို့အဘို့အဘယ်သူသည်အလုပ်လုပ်ကြဘူး? သငျသညျယရှေုကိုအလုပ်လုပ်.
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာခက်လုပ်ကိုင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေနိုင်သည်, ဒါပေမဲ့မှားလူတို့အဘို့ထိုသို့ပြုမှ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပြသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့မိဘများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်စိတ်တော်. ကျနော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ကိုကျော်အာဏာပိုင်များရှိပါဘူးနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့မမှအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ. ကျနော်တို့သူ့မေတ္တာဝင်ငွေမနိုင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူ့ကိုချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်သူ့ကိုနှစ်သက်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်.
3. သငျသညျအဘယျသို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည်? သငျသညျဆုလာဘ်အဖြစ်သင့်အမွေဥစ္စာကို
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာပင်ယေရှုအတွက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေနိုင်သည်, ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာအကြှနျုပျဖြစ်ပါသည်စဉ်းစားရန်, ငါဘာမှမများအတွက်အလုပ်လုပ်. အဲဒါမှားနေတယ်! သငျသညျဘုရားသခငျသညျနှစ်သက်အလုပ်လုပ်, သငျသညျအထံတော်မှဖြေဆို. ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏ လုပ်. ရသောဥစ္စာအဘို့ဆုခပါလိမ့်မည်, ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်. သူ၏ကျေးဇူးတရားနေကြတဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆျောသူကိုတတ်မှုအကျွန်တော်တို့ကိုဆု. တစ်ဦးကလစာပတ်ပတ်လည်သင်၏အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ထာဝရဆုလာဘ်များမှာ.
သငျသညျအစဉျအမွဲငါတို့သည်အဘယ်သို့ scheme ကိုကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျ၌ထရစ်ပတ်နေတဲ့အမှုအရာအဘို့သတိထားမိဖူး?
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၌ဤမွငျရင့်နှင့်အားဖြင့်ထင်ရှားစွာဖြစ်. ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖွင့်. ငါ Sneaker တစ်ဦးကိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပျက်. အခြို့ကိုအကြိမ်ရေများလွန်းကြောင့်၌ထရစ်ပတ်ထုပ်ပိုးရနိုင်. ဒါကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကကျနော်တို့အခြားမြို့၌ရှိနေစဉ်အလွန်ကြီးစွာသော Sneaker စတိုးဆိုင်ကိုသွားမယ့်အခွင့်အလမ်းနှင့်ငါကအကြောင်းအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့. ဒါကြောင့်ထွက်အလုပ်လုပ်သွားမခံခဲ့ရတူပြီးတော့သူကကွညျ့ရှု.
ငါထွက် freaked နှင့်ကဖြစ်ပျက်စေရန်ဒုက္ခအများကြီးမှတဆင့်သွားခဲ့သည်. ငါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုပြောင်းလဲစဉ်းစားခဲ့, စသည်တို့ကို. ထိုအခါမူကား, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်နှင့်မေးလျှင်, "အဘယ်ကြောင့်?"ငါကထပတ်ရစ်ခဲ့သောကြောင့်.
ကျနော်တို့ကိုချစ်ကြောင်းအရာများအတွက်အစီအစဉ်ဟန်. အမှုအရာဖြစ်ပျက်စေရန်နည်းလမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့. သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေကိုချစ်သောအခါအသင်အဘို့သင်၏အသက်တာ၌ရှိသမျှသော Nook and cranny သုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့. သူကတန်ဖိုးရှိင်.
အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျဤ: Chase ယေရှုနှင့်ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အရာအားလုံးကိုမြင်သည်အထိသူနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ.
Emeteria • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 တွင် 2:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်! ငါသည်ဤယနေ့စကားကိုနားထောငျဖို့လိုအပျ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Keshia • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 တွင် 2:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Gordie Tamayo • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 တွင် 2:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဒါကအများကြီးနှလုံးဖို့လိုအပျမြားနှငျ့ယူခဲ့ပါတယ်. က G
ကင်မရွန် • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 တွင် 8:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အမှန်ဆိုသည်ကား,, ငါ့အသက်ကိုငါဦးစားပေးကဒီကိုဖတ်ရှုခြင်းမှရှုထောင့်ထဲသို့သွင်းထားကြပြီ…… တစ်ခါတလေကျွန်မလျော့နည်းငါလုပ်ဖို့ကိုခေါ်နေပါတယ်အလုပ်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းခံစားမိ…..ဤမျှလောက်ဘုရားသခငျသညျအချိန်ငါအရှိဆုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုကောင်းကြီးဟာအလွန်လက်ဆောင်တွေစီရင်ချက်ကိုပယ်လေ့နိုင်အောင်…..အရှင်ငါပြုပါအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးတည်းသူ့ဘုနျးတျောကိုမြားနှငျ့ဘုနျးတျောကိုအဘို့အကြောင်းမေ့အလွန်ဘုရားသခငျသညျပွုပါနှင့်သူ၏မေတ္တာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ကျွန်မကိုခေါ်ဆိုအလုပ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ငါ့ဝန်ဆောင်မှု၏ဝိညာဉျသရည်ရွယ်ချက်စီရင်ချက်ကိုပယ်နှင့်ငါ၏ဖြစ်စဉ်……#blesstobecallforpurpose #
Kaputula ဆောင်ကြဉ်း • ဒီဇင်ဘာလ 20, 2014 တွင် 4:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နက်ရှိုင်းသော bro.am အားပေးတိုက်တွန်း
မိုက်ကယ် • ဒီဇင်ဘာလ 22, 2014 တွင် 3:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
'' Chase ယေရှုနှင့်ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်သည်အထိသူနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်။’
ခရစ် • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 12:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်ဆောင်းပါး bro. ဒါဟာငါ့ကိုအားပေးတယ်နှင့်အချို့သောအရေးကြီးသောအခြေခံမူများငါ့ကိုသတိပေး. ဒါကြောင့်စေ့စေ့ကမျြးစာကိုဖတ်နေဆက်လက်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့် Hacking ကို, ကမျြးစာကိုအစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုသက်တမ်းတိုးမည်. ထိုစကားကိုအဝင်အဖြစ်, “သင်ကမသုံးကြပါလျှင်, သင်ကဆုံးရှုံး”. ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာ၌ပါထဲကနေလေ့လာသင်ယူသောအရာကိုအလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားနှင့်ကတစ်ဦးလေ့အလေ့အကျင့်ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာင်. ရှုပျထှေးစေ, စိတ်ကျရောဂါ, စနစ်တကျကိုင်တွယ်မရသည့်အခါရုန်းကန်မှုများဆင်းရဲသားကိုအလေ့အထများဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်, ပိုပြီးမကျေနပ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့. ဘုရားသခငျ၏တလမ်းအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ခရစ်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏လမ်းဖြစ်ပါသည်နှင့်ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း.
Sammy Msiska • ဇန္နဝါရီလ 21, 2015 တွင် 11:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျဘုရားသခငျသညျခြီးမွှောကျဖို့သူတို့ရဲ့ရှိသမျှသောဆုကြေးဇူးကိုအသုံးပွုသူမြားကိုလူမြိုး၏စံနမူနာကောငျးများမှာ. ငါသည်သင်တို့ရုံစကားလုံးစကားပြောပေမယ့်လည်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်. သငျသညျအကြှနျုပျကိုခရီးစဉ်တွင်လာအောင်နှိုးဆွ…Glorifyin ဘုရားသခငျသညျအပျေါကိုစောင့်ရှောက်
TamekaBowen • မတ်လ 2, 2015 တွင် 5:21 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်အင်အားကြီးမား. အရာအားလုံးအမှန်တကယ်ယရှေုကိုယရှေုသညျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်. ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါတို့ဝိညာဉ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောမိမိအဧဝံဂေလိတရားကိုတင်ပေးဖို့ဖို့ဘာပိုကောင်းအခွင့်အလမ်း!! ဟာလေလုယသောအရာကိုတစ်ဦးအစွမ်းထက်သတင်းစကား!! :-)
လီယို • ဇွန်လ 24, 2015 တွင် 6:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နေ့စဉ်ဈအနည်းငယ်ညာနဲ့အများကြီးမှားယွင်းတဲ့ကျင့်သောကြောင့်ငါခစျြလ, ငါသည်ဤတွေအများကြီးကိုမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့သင်၏စကားငါ့ကိုအပြောင်းအလဲအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေးခဲ့တယ်. ကျနော်တို့ကောင်းစွာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်မနေသင့်နှင့်ဤကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါမည်
လီယို • ဒီဇင်ဘာလ 11, 2015 တွင် 2:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မယုံကြည်နိုင်သော, ဒီဟောပြောခြင်းအတှကျဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျးပါ, သူကမကြာခင်သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများစပိနျသို့ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်ငံ့လင့်လျက်, ကျနော်တို့အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်!